I-TxTFi: Nika amandla i-Shopify Reordering Via Text Message | Martech Zone
I-TxTFi: Nika amandla i-Shopify Reordering Via Text Message
Uku-oda kabusha ngokuzenzakalela umlayezo wombhalo kushibhile futhi kusebenza kangcono ekuzuzeni i-oda lesibili noma lesithathu kubathengi bakho abakhona. Sika wonke umsindo - vumela amakhasimende akho a-oda lapho futhi azizwa ekhululekile khona futhi kanjani. Nge TxTFi ngoba Thenga, awudingi ukwenza lutho. Konke kuzenzakalelayo. Vele usethe bese ukhohlwa.
Ama-oda we-SMS we-Shopify
TxTFi plugs ku-Shopify ngokuzenzakalela futhi ifinyelela kumakhasimende akho ngomyalezo wombhalo ozenzakalelayo ukunikela ngesicelo esimnene soku-oda kabusha, konke ngomyalezo wombhalo. Futhi, ikhasimende lakho lingadala i-oda lalo bese lengeza izinto ngaphakathi kwale ngxoxo yemilayezo yombhalo.
Uma usuqedile, TxTFi yakha isixhumanisi sokuvumela amakhasimende ukuthi angene ngqo ekhasini lakho lokuphuma le-Shopify. Konke ikhasimende okufanele likwenze ukukhokha okuphelele – yilokho kuphela. Zonke izinqubo zokukhokha noku-oda ziyaqhubeka zisebenza njengoba zisebenza manje.
Izici Nezinzuzo ze-TxTFi SMS
Iselula Kuphela - Amakhasimende ahlala esendleleni. Uku-oda umbhalo kwenza kube lula, kusheshe, kube lula kubo, nakuwe
I-Automated Ngokugcwele - I-TXTFi Bot ixhumana ngokuphelele nekhasimende lakho — iyazenzakalela ngokuphelele, asikho isiqondiso noma ukugadwa okudingekayo.
Izikhumbuzo - Ngena ngokuzenzakalela ngamakhasimende angaphenduli; ivumela amakhasimende amandla okusetha okulandelayo.
Oda umkhiqizo omningiI-s - TXTFi Bot ingaphatha kalula umkhiqizo owodwa noma eminingi ngokulandelana.
Imilayezo ekhonjiwe - Cindezela ngokuzenzakalela ngokuya ngokusungula, okubhaliselwe, ukuphuma.
Checkout Easy - I-TXTFi isebenzisa ukuphuma kwakho kwe-Shopify yangakini, ngaphambi kokugcwalisa yonke imininingwane. Amakhasimende aqinisekisa nje ukukhokha.
Ukudalulwa: Singabanxusa be- I-TXTFi.
Tags: shopify yeselulaama-oda wombhalo weselulaoda kabushathengasms ecommercei-sms odaumlayezo wombhalotxtfi